June 2020 – Page2– ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်
ဘားအံ ဇွန်လ (၂၆)ရက် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကို တင်ပြတိုင်ကြားလာသော ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအား (၂၆.၆. ၂၀ ၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀၀၀)နာရီအချိန်တွင် တိုင်ကြားစာကော်မတီ၏ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကော်မတီအဖွဲ့၀င်များသည် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီခန်းမ၌ ပြည်သူတို့တိုင်ကြားစာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ (26-June-2020) Friday
ကော့ကရိတ်၊ ဇွန်လ (၂၆) ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ‌‌ ဒေါ်နန်းသူဇာ၀င်း၊ ဘဏ္ဍာ‌ငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြံပြုရေးကော်မတီ၀င်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာ၀န်ရှိသူများတို့သည် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ ထီးဖိုစံကျေးရွာ တူးမြောင်းဖောက်လုပ်ပြီးစီးမှုအခြေအနေနှင့် ထီးဖိုစံအခြေခံပညာအထက်တန်း ကျောင်း(ခွဲ)၊ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ယာတစ်လုံး ဆောက်လုပ်နေမှုအခြေအနေအား ကွီမောင်တိုင်ကျေးရွာအမကစက်ရေတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်နဘူး – နောင်တပွဲလမ်းပေါ်ရှိတံတားအားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ (26-June-2020) Friday
ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ
ကော့ကရိတ်၊ ဇွန်လ (၂၆)ရက် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ၊ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေများဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိ တ်မြို့နယ်အတွင်း ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီများမှ တည်ဆောက်ပြီး၊ တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သော လုပ်ငန်းများကို ဒုတိယအကြိမ်ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နန်းသူဇာဝင်းဘဏ္ဍာငွေအရသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြံပြုရေးကော်မတီဥက္ကဌဦးသန့်ဇင်အောင်နှင့်ကော်မတီဝင်များ၊ လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများ (QC)အဖွဲ့များမှကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊အထွေ ထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမတွင် (၂၆.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက်(၀၈၀၀)နာရီအချိန်တွင် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ (26-June-2020) FridaySecond Day
Posted on June 26, 2020 June 29, 2020 Author admin	18 Views
ဘားအံ ဇွန်လ (၂၅) ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကို တင်ပြတိုင်ကြားလာသော ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအား (၂၅.၆. ၂၀ ၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀၀၀)နာရီအချိန်တွင် တိုင်ကြားစာကော်မတီ၏ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကော်မတီအဖွဲ့၀င်များသည် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီခန်းမ၌ ပြည်သူတို့တိုင်ကြားစာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ (25-June-2020) Thursday
Posted on June 25, 2020 June 29, 2020 Author admin	20 Views
၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ၊ ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေများဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ ကော့ကရိတ်ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး (၂၀၀×၃၀×၂၄)RCC (နှစ်ထပ်) ဆောက်လုပ်နေခြင်းကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့။
ကော့ကရိတ်၊ ဇွန်လ (၂၅)ရက် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ၊ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေများဖြင့် ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်း ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်တင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီများမှ တည်ဆောက်ပြီး၊ တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သော လုပ်ငန်းများကို ဒုတိယအကြိမ်ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နန်းသူဇာဝင်း၊ ဘဏ္ဍာငွေအရသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြံပြုရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးသန့်ဇင်အောင်နှင့် ကော်မတီဝင်များ၊ လွှတ်တော်ရုံးဝန် ထမ်းများ (QC)အဖွဲ့များမှ ကော့ကရိတ်ခရိုင်အထွေ ထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး (၂၀၀× ၃၀ ×၂၄) RCC(နှစ်ထပ်)ဆောက်လုပ်နေခြင်းကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ (25.June.2020) Tuesday
Posted on June 25, 2020 June 29, 2020 Author admin	22 Views
၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ၊ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေများဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်း ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီများမှ တည်ဆောက်ပြီး၊ တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သော လုပ်ငန်းများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးပြုလုပ်။
ကော့ကရိတ်၊ ဇွန်လ (၂၅)ရက် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ၊ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေများဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်း ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်တင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီများမှ တည်ဆောက်ပြီး၊တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သော လုပ်ငန်းများကို ဒုတိယအကြိမ်ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နန်းသူဇာဝင်း၊ ဘဏ္ဍာငွေအရသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြံပြုရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးသန့်ဇင်အောင်နှင့် ကော်မတီဝင်များ၊ လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများ(QC)အဖွဲ့များမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးခန်းမတွင် (၂၅.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက်(၀၈၀၀)နာရီအချိန်တွင် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ (25-June-2020) ThursdayFirst Day
Posted on June 25, 2020 June 29, 2020 Author admin	16 Views
ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နားနေဆောင်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်း အဝေး ပြုလုပ်။
ဘားအံ၊ ဇွန်လ (၂‌၃)ရက် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ(၂၃)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၃၀၀)နာရီအချိန်တွင် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး၊ Minor Meeting Room ၌ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောချစ်ခင် အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး၊ အစည်းအဝေးမှ တက်ရောက်လာသူများ အပြန်အလှန် ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဘဏ္ဍာ‌ငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြံပြုရေးကော်မတီ၀င်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေးနှင့် အရည်အသွေးစိစစ်အကြုံပြုရေးကော်မတီ၀င်များ၊ လွှတ်‌တော်ရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ အစည်းအဝေး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ (23-June-2020) Tuesday
Posted on June 23, 2020 Author admin	21 Views
ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောချစ်ခင်သည် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ ကိုမောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရမ်းကျွတ်ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ လိုအပ်သည့် ဘိလပ်မြေအိတ်( ၅၀၀)အား‌ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့။
လှိုင်းဘွဲ၊ ဇွန်လ (၂၃)ရက် (၂၃.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောချစ်ခင်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်ဦးခင်ချို၊ လွှတ်တော်ရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများသည် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ ကိုမောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရမ်းကျွတ်ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ဘိလပ်မြေအိတ်( ၅၀၀)အား‌ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကိုပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ (23-June-2020) Tuesday
Posted on June 23, 2020 June 23, 2020 Author admin	17 Views
ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ နောင်ထက်ပံကျေးရွာရှိ နောင်ထက်ပံကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းနှင့် တံတားတည်‌ဆောက်နေမှုအား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှူ
ကော့ကရိတ်၊ ဇွန်လ (‌၂၀)ရက် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်နန်းသူဇာ၀င်းသည် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ နောင်ထက်ပံကျေးရွာရှိ နောင်ထက်ပံကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းနှင့် တံတားတည်‌ဆောက်နေမှုအား သွားရောက်ပြီး ဇွန်လ(‌၂၀) ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု့ခဲ့ပါသည်။ (20-June-2020) Saturday
Posted on June 20, 2020 June 22, 2020 Author admin	24 Views
ကရင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစောချစ်ခင် (Covid-19) ကာလအတွင်း ထပ်ဆောင်းထောက်ပံ့ငွေများ ကျေးရွာအရောက်ပေးအပ်။
လှိုင်းဘွဲ၊ ဇွန်လ (၂၀)ရက် ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် အသက်(၈၅)နှစ်အထက် သက်ကြီးဘိုးဘွားများ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များနှင့် အသက်(၂)နှစ်အောက် ကလေးငယ်များအား (Covid-19) ကာလအတွင်း ထပ်ဆောင်းထောက်ပံ့ငွေများကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစောချစ်ခင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကျေးရွာအရောက် ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ကရင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစောချစ်ခင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါ၍ ကဒီကံကျေးရွာအုပ်စုတွင် သက်ကြီးဘိုးဘွား(၂)ဦး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် အသက်(၂)နှစ်အောက် ကလေးငယ်(၃၉)ဦး၊ တာပေါင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် သက်ကြီးဘိုးဘွား(၂၂)ဦး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် အသက်(၂)နှစ်အောက်ကလေးငယ်(၁၉၅)ဦး တို့ကို ကျေးရွာအရောက် ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ (20-June-2020) Saturday
Posted on June 20, 2020 June 22, 2020 Author admin	20 Views